မိုးဖွဲလေးနဲ့အတူ မင်းကို…. | htaikseng
ဒီလိုပဲ မိုးစက်တွေ တစ်ဖြောက်ဖြောက်နဲ့ ဒီအင်းယားကန်ပြင်ရှေ့မှာပဲ စကားတွေဖောင်ဖွဲ့ အနာဂတ်တိမ်တိမ်တွေပေါ် ငါတို့ အိမ်မက်ကမ္ဘာလေး ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။ တည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ်။ တစ်ပေါက်ပေါက်ကျနေတဲ့ မိုးစက်နဲ့အတူ မလုံ့တစ်လုံ့ ထီးလေးကိုမျှဝေဆောင်းလို့ ငါတို့ ပျော်ရွင် ကြည်နူးမဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။
ခုတော့လည်း ဒီကန်ရေပြင်နားက ငါတို့လောက်နိဗ္ဗာန်လေးဟာ အုတ်လမ်းတွေ၊ ထိုင်ခုံတန်းတွေနဲ့ ချစ်သူတို့ကမ္ဘာဖြစ်နေပါရောလား။ သိပ်ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ နင်နဲ့ငါသာ ဒီရေပြင်ကြီးရှေ့မှ မသာယာနိုင်တော့ပါလား။ အိမ်မက်တိမ်တိုက်တွေ လွင့်စင်ပြယ်ပြီးချိန်က စပြီးတော့……
ဒီမှာ ငါလေ ဒီရေပြင်ကိုငေး ကန်ရေပြင်ဘေးက သစ်ပင်ကိုမှီလို့ ဟိုး လွန်လေပြီးတဲ့ အတိတ်ပုံရိပ်ဟောင်းတွေ ပြန်တမ်းတ သတိရ …ဟိုးအဝေး အရင်တုန်းက …. ပုံရိပ်တွေ စိတ်ရုပ်မှာထင် ရုပ်ရှင်တစ်ခုပမာ ခံစားမှုတွေပါသယ်အလာ …..